Ihe ngosi 25 ị ga - enweta na macOS High Sierra | Esi m mac
Ihe ngosi 25 ị ga - enweta na macOS High Sierra
José Alfocea | | MacOS Sierra ukwu
N'ehihie a, na awa ole na ole, na macOS High Sierra ukara tọhapụ, desktọọpụ sistemụ arụmọrụ nke Apple mere maka Macs anyị.
N'okpuru aha a, ụlọ ọrụ Cupertino yiri ka ọ chọrọ igosipụta na ọ bụ ọkwa dị elu na mmalite nke macOS, ọganihu dịwanye mma. Nke a emeela ka ndị mmadụ mara na atụmatụ ọhụrụ ahụ pere mpe na ọ bụ nsụgharị dị mfe nke mmelite. Dị ka ị ga-ahụ n'okpuru, ọ nweghị ihe ọ bụla nwere ike isi na eziokwu ahụ pụta n'ihi na macOS High Sierra enwere ọtụtụ ihe ị na - enweghị ike ịme tupu, ọ bụ ezie na na anya ihe niile yiri otu.
macOS High Sierra, akụkọ karịa ka ị chere
MacOS High Sierra adịghị enye anyị akwụkwọ ọhụụ na ọkwa mara mma. N'ezie, ebe ọ bụ na ọdịda Yosemite, ihe niile anọgidewo na-enweghị ike ịgbagha agbagha na ọkwa ahụ, agbanyeghị, ọrụ ọhụụ na atụmatụ ga-adị ọtụtụ ma dịgasị iche iche. Ọtụtụ mgbe, ọ na-agụnye obere mgbanwe ndị ahụ na-eme mgbanwe nke ahụ na-emekwa anyị obi ụtọ macOS dị ka ụbọchị mbụ.
Ọ bụrụ n ’ị chere na macOS High Sierra agaghị ewetara gị ihe ọhụụ, ọ dị m nwute ịgwa gị na ị mejọrọ nke ukwuu. N'ezie, ị nwedịrị ike rejuvenate agadi akụrụngwa. Ekwenyesiri m ike na ozugbo ị gụchara akwụkwọ a, ị ga na-atụ anya elekere asaa nke abalị elekere Spanish iji budata ma wụnye sistemụ arụmọrụ ọhụrụ. Ka anyị hụ ihe atụmatụ ndị a niile dị na MacOS High Sierra, njirimara na akụkọ bụ:
Sistemụ faịlụ ọhụrụ Apple File System (APFS) nke na-anọchi usoro HFS + gara aga, sistemụ nke dị afọ iri atọ, nke ahụ ga-emekwa ka ọsọ ọsọ njikwa faili Mac nke anyị "ofufe".
Nwere ike hazie ibe weebụ ị nọ na ya idozi nkọwa dika adblock, mbugharị na ndị ọzọ, na ibe ọ bụla.
Anyị nwekwara ike ịtọ akpaka ọgụgụ mode maka ibe weebụ ndị ahụ niile na-akwado usoro a. Obi abụọ adịghị ya, obere nkọwa ga-eme ka ọ dịrị ndị anyị mfe ileta ma gụọ ọtụtụ isiokwu kwa ụbọchị.
You gakwaghị echere maka ozi ezitere na iPhone gị ka ọ pụta na Mac gị, ma ọ bụ nke ọzọ, n'ihi na site ugbu a gaa n'ihu ozi na-synced site na iCloud, yabụ na ị gaghịzi enwe nsogbu mmekọrịta.
Iji chekwaa ike na akụrụngwa, mgbe anyị na-emebeghị ngwa maka nkeji ole na ole, ọ na-emechi.
Ngwa ahụ Ozi dị ugbu a na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ bụghị naanị n'ihi na ozi ịntanetị ga-enweta ihe ruru 30% obere ohere kamakwa n'ihi na ọ dị ngwa ngwa ịchọ ozi email yana kwa, anyị ga-enwe ike ịnweta ozi-e ise ahụ anyị kachasị nweta, ka anyị wee nwere ike ịdị ngwa ngwa.
Hụchalụ na Ozi na ihe omuma ohuru nke ga enyere anyi aka ide ozi n’otu oge n’ile anya n’enye ndi anyi natara.
Siri nwere obi uto ma ugbu a olu ya bu ihe okike karie robotic.
Na Safari, a njikwa kuki ka mma ọ ga - egbochi ndị mgbasa ozi “ịchụ” anyị n'ofe weebụ na ngwaahịa anyị chọtara. Ozi ndị ọzọ ebe a.
Ọzọkwa ihe odide Siri na-egosi anyị na-eme ka ọgụgụ isi ha dịkwuo mma na a ukwuu format na a ọhụrụ animation na akara ngosi
Ma ọ bụrụ na ị chọọ, ị nwere ike deegara Siri kama ịgwa ya okwu, dị ukwuu mgbe ịnọghị naanị gị.
Anyị nwekwara ike ekenye foto ma ọ bụ vidio ihe ncheta site na ngwa Foto n'onwe ya.
Mmekọrịta foto na teknụzụ ihu ihu Apple.
Anyị nwere ike jikota foto atọ mepụta foto na-akpụ akpụ, ụdị GIF ma ọ bụ Foto Dị Ndụ.
Gaa n'ihu na nhọrọ nke dezie foto tupu iwere ha, ngwá ọrụ ị nwere ike ịchọta na ngwa Foto.
Na macOS High Sierra, Akụkụ ihe nchọta bụ ihe na-adịgide adịgide.
You ga-enwekwa ike mepụta ncheta site na ndetu nke anyị ga-ahọrọ ederede anyị chọrọ ka anyị cheta.
Ewoo! Anyị nwere ike mepụta tebụl na ndetu. Ndị a bụ tebụl dị mfe, mana tebụl mgbe niile, bara uru kwa ụbọchị.
na aro aro ruru Notes.
Mee screenshots na oku FaceTime. Otu abụọ ahụ ga-enweta ọkwa na snapshot ahụ, yabụ echela ihe ọjọọ.
Chọọ ụgbọ elu na Chakwasa ihie.
Otu n'ime ndị ọkacha mmasị m: ịkọrọ faịlụ site na iCloud. Nke a bụrịrị ihe ọzọ.
Ma ọ bụ ezie na ọ bụghị naanị na macOS High Sierra, site ugbu a gaa n'ihu anyị nwekwara ike ịkọrọ anyị iCloud nchekwa atụmatụ na En FamiliaEe, anyị ga-enwerịrị nhọrọ 200 GB.
Ndozi ahụigodo maka ndị ọrụ Arab na ndị Japan.
Ma n'ezie a mara mma ọhụrụ na desktọọpụ akwụkwọ ahụaja, obere uru ma na anyị na-achọ ịhụ mgbe niile.
Echefukwala kwadebe gị Mac maka mbata nke macOS High Sierra ma si otú a nwee ike ịnụ ụtọ ahụmịhe kachasị mma na ọrụ na atụmatụ ndị a niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac OS X » MacOS Sierra ukwu » Ihe ngosi 25 ị ga - enweta na macOS High Sierra
Hazie ọkacha mmasị gị ibe weebụ na-amasị gị ekele Safari na MacOS High Sierra
Mbido mbụ na mbido mbụ nke Apple TV 4k